यी जोडीकाे कस्तो मायाप्रेम! अस्पतालमा श्रीमति भन्छिनः मारिदिनुस्, श्रीमान भन्छनः आफ्नै श्रीमति कसरी मार्नु? – हेर्नुस् भिडियो – PathivaraOnline
Home > भिडियो > यी जोडीकाे कस्तो मायाप्रेम! अस्पतालमा श्रीमति भन्छिनः मारिदिनुस्, श्रीमान भन्छनः आफ्नै श्रीमति कसरी मार्नु? – हेर्नुस् भिडियो
यी जोडीकाे कस्तो मायाप्रेम! अस्पतालमा श्रीमति भन्छिनः मारिदिनुस्, श्रीमान भन्छनः आफ्नै श्रीमति कसरी मार्नु? – हेर्नुस् भिडियो
admin March 7, 2019 भिडियो 0
भक्तपुर। ट्रमा सेन्टरको पाँचौं तलामा रहेको ५ सय १४ नम्बर बेडमा चेली तामाङ एकोहोरो टोलाइरहेकी छिन् । छेउमै अडेस लागेका छन् उनका श्रीमान बसन्त कुमार ठाकुरी। चेली हलचल गर्न सक्दिनन् । बसन्तलाई त्यसबेला असाह्यै पीडा हुन्छ, जब श्रीमतीले ‘मलाई मारिदिनुस्’ भन्छिन् । उनी आफैलाई प्रश्न गर्छन् ,’म मेरै श्रीमतीलाई कसरी मार्न सक्छु ।
जब निकै गाह्रो हुन्छ, चेली मर्ने कुरा गर्छिन् । अलिअलि ठीक भएका बेला भने केही वर्ष बाँच्ने आशा राख्छिन् । बसन्त भने ‘२, ४ वर्षले पुग्दैन, म बाँचुञ्जेल तिमी मेरो छेवैमा हुनुपर्छ’ भन्छन् ।’
रेशम चाैधरीलार्इ अन्याय भयो भन्दै आङकाजीले दिए हतियार उठाउने चेतावनी… के के भन्दैछन? भिडियोमा हेर्नुहाेस